Serivisy - Utien Pack Co ,. Ltd.
Utien Pack dia manome serivisy fonosana iray, ao anatin'izany ny fakan-kevitra amin'ny fonosana, ny fiofanana momba ny asa ary ny vahaolana amin'ny teknolojia.
1, fakan-kevitra momba ny fonosana matihanina sy vahaolana
Utien Pack dia afaka manolotra vahaolana fonosana mahafa-po mifanaraka amin'ny fitakian'ny mpanjifa.
Rehefa niantso ny valin'ny mpanjifa izahay dia hanomboka handinika, hifanakalo hevitra ary hamolavola ny tolo-kevitra fonosana ny ekipanay injeniera. Amin'ny alàlan'ny famolavolana ny asan'ny milina, ny refy ampiasain'ny masinina, ary ny fampidirana ireo fitaovana fahatelo mety, izahay dia manolo-tena amin'ny fanaovana vahaolana farany fonosana ho an'ny famokaran'ny mpanjifa.
2, fanesorana ny masinina
Alohan'ny hanaterana ny masinina, Utien Pack dia hanao debugging tsara amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny antsipiriany rehetra, toy ny fametrahana ny masontsivana, ny sary vongana, ny fitambaran'ny singa, ny mariky ny faritra, sns.
3, serivisy aorian'ny fivarotana
Utien Pack dia miantoka fiantohana mandritra ny 12 volana ho an'ny masininay, tsy manilika ireo faritra azo ampiasaina toy ny silicon strip sy wire wire. Rehefa misy olana mahazo ny masinina dia faly izahay manolotra fitarihana teknolojia an-tserasera. Ny injenierantsika koa dia afaka mandeha any ivelany mba hametrahana milina, fiofanana fototra ary fanamboarana. Ny antsipiriany bebe kokoa dia azo resahina bebe kokoa.
4, fonosana fitsapana
Tongasoa ny mpanjifa handefa ny vokariny any amin'ny ozinantsika ho famonosana fitsapana maimaimpoana.